Air na-arụ ọrụ na hydraulic - EPONT
Air na-arụ ọrụ na hydraulic
’Re nọ n’ebe kwesịrị ekwesị maka Air na-arụ ọrụ na hydraulic.Ka ọ dị ugbu a ị maraworị na, ihe ọ bụla ị na-achọ, ị doro anya na ịchọta ya EPONT.anyị na-ekwe nkwa na ọ bụ ebe a na EPONT.
A na-ahọrọ ihe ndị EPTET dabere na nkọwapụta ndị ahịa / nha..
Nzube anyị na-enye ndị kasị mma Air na-arụ ọrụ na hydraulic.n'ihi na anyị ogologo oge ahịa na anyị ga-ifịk ifịk na-akwado ndị ahịa anyị na-enye irè ngwọta na-eri uru.
Nchara.Ngwaahịa a ejirila ule nke ndị otu egwuregwu QC anyị na ndị ọzọ nyere ikike. abidowo ọkachamara na mmepụta nke ọtụtụ afọ.Ngwaahịa a bụ hypollergenic ma yabụ na-eme ka anụ ahụ dị nro, belata ihe ize ndụ nke mmeghachi omume ọjọọ.
Nzukọ na ngosi.Ndị ọrịa na-enwe ike irite uru na àgwà dị iche iche nke ngwaahịa a na-enye - arụmọrụ zuru oke, dị mfe, na izi ezi.
na ịgbado ọkụ karama Jack 50T